एक मुनाफारहित कसरी सुरु गर्न | USAHello देखि क्यारियर स्रोतहरू | USAHello
एक कार्यक्रम वा आफ्नो समुदाय सहयोग गर्न एउटा सानो संगठन - के तपाईं कहिल्यै नाफारहित कसरी सुरु गर्न छक्क परे छ? यहाँ केही कदम हो तपाईं आफ्नो समुदायमा एउटा समस्या पहिचान गर्न लाग्न सक्छ, एक समाधान खोज्न, र जीवन आफ्नो विचार ल्याउन. गैर-नाफामुखी पनि भनिन्छ “परोपकार।”
शरणार्थी र आप्रवासी तपाईं सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ कि विशेष आवश्यकता छ. तर तपाईं सिक्न अघि नाफारहित सुरु र तिनीहरूलाई मदत गर्न कसरी, अन्य सेवाहरू उपलब्ध छन् के हेर्न सावधानीपूर्वक जाँच गर्नुहोस्. कहिलेकाहीं मदत गर्न सक्छ कि नाफारहित संगठन पहिले नै अवस्थित!
कुनै पनि समस्या समाधान को सुरूवात बिन्दु समस्या सजग रहेको छ. तपाईं एक नाफारहित सुरु गर्ने बारे सोच्न रूपमा, विवादहरू के हुन् वा तपाईं आफ्नो समुदायमा हेर्न आवश्यक? तपाईं विद्यार्थीहरू विद्यालय वा असफल कक्षाहरू बाहिर गिर देख्नुहुन्छ? तपाईं त्यहाँ वयस्क newcomers फेला जब मदत गर्न आवश्यक छ कि देख्न सक्छ. तपाईं समस्या पत्ता लगाउन एक पटक समाधान बारे सोच सुरु र तपाईं कसरी मदत गर्न सक्छ बाहिर आंकडा गर्न सक्नुहुन्छ.
2. छनौट र दर्ता नाम
एक पटक तपाईं आफ्नो मुनाफारहित संगठित गर्ने निर्णय, तपाईं यसलाई वर्णन नाम संग आउनु पर्छ. तपाईं वर्णन गर्ने नाफारहित गर्छ के नाम वा जो यो सेवा चयन गर्न सक्छ. केही गैर-नाफामुखी सिर्फ एक अवधारणा हो कि एक शब्द छ प्रयोग गर्नुहुने. नाम अघि प्रयोग गरिएको जाँच. तपाईं राज्य को सचिव को कार्यालय सम्पर्क गर्न आवश्यक हुनेछ. प्रत्येक राज्य यी कार्यालय को एक छ. आफ्नो नाम दर्ता गर्न, तपाईं एउटा सानो शुल्क तिर्न र फाइल एक कागजात भनिन्छ हुनेछ “संस्थापन को लेख।”
3. एक आईआरएस कर छुट लागि लागू
नाफारहित अर्थ पैसा बनाउने छैन. गैर-नाफामुखी आफ्नो आय मा कर तिर्न छैन लागू गर्न सक्नुहुन्छ. के तपाईं प्रकारका भर्न पैसा बनाउन हुनेछैन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ. आन्तरिक राजस्व सेवा प्रकारका समीक्षा हुनेछ. तिनीहरूले तपाईंलाई योग्य लाग्छ भने, तपाईं प्राप्त हुनेछ 501(ग)(3) स्थिति.
के तपाईं व्यापार योजना आवश्यक हुनेछ, तापनि के तपाईं व्यापार सुरु छैनन्! यो एक नाफारहित सुरु गर्न कसरी एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो. एक व्यापार योजना बिना, के तपाईं लिन आवश्यक कदम को स्पष्ट अर्थमा छैन, तपाईं उठाउनु आवश्यक पैसा, र तपाईं आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नेछ कसरी.
5. तपाईंको नाफारहित समावेश
एक पटक तपाईंले गरेको नाफारहित को लेख पायो, तपाईं यसलाई समावेश गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ. यो तपाईंको कार्यक्रम र सेवाहरू आफ्नो बोर्ड संरचना थप विश्वसनीयता दिनेछु. चुरा र शुल्क राज्य भिन्न हुनेछ. संस्थापन तपाईंको नाफारहित रजस्टर, तर यो बनाउन गर्दैन 501(ग)(3) छूट.
6. आफ्नो बोर्ड निर्माण
एक बोर्ड संगठन बारे निर्णय गर्ने मान्छे को एक समूह छ. तिनीहरूले सामान्यतया यो कामको लागि भुक्तानी छैन. तिनीहरूले के संगठन परियोजनाहरु काम गरिरहेको छ भनेर निर्णय गर्न मद्दत. तिनीहरूले पनि धन हुर्काउनु र संगठन बारे अन्य बताउन. विभिन्न उमेर को बोर्ड मा मान्छे भइरहेको, जात, र पेशों नयाँ विचार ल्याउँछ.
तपाईं कति पैसा चाहिन्छ आफ्नो नाफारहित सुरु गर्न? तपाईं एक कार्यालय भाडामा गर्न चाहनुहुन्छ भने निर्णय र अन्य मानिसहरू मदत गर्न तपाईं किराया गर्न चाहनुहुन्छ भने. तपाईं आवश्यक उपकरण बाहिर सूची समय लाग्न. आपूर्ति र यातायात सोच्न. तपाईं उधारो गर्न सक्छन् कुराहरू हुन सक्छ, लागि सम्झौता, वा समुदायको दान प्राप्त.
8. समर्थन लागि आफ्नो समुदाय बाहिर पुग्न
जब तपाईँले समुदाय लक्ष्य सेट, तपाईं समर्थन गर्न आवश्यक हुनेछ. तपाईंको विचार समर्थन गर्ने अधिकार मानिसहरू र अन्य संगठनहरू फेला पार्न आफ्नो समुदाय जडान. प्रमुख मान्छे र संगठनों बाहिर सूची, र आफ्नो योजना बारे तिनीहरूलाई बताउन. पुस्तकालय, गैर-मुनाफा, र resettlement केन्द्र सम्पर्क गर्न सबै ठूलो ठाउँ हुन्. जस्तै, तपाईंको विचार छ भने जवानहरूले स्कूल पछि बास्केटबल खेल, तपाईं एक सामुदायिक केन्द्र संग र केही कोच संग साझेदार सकेजति.
एक मुनाफारहित कार्यकारी निर्देशक कसरी हुन
को आईआरएस देखि परोपकारी संगठनका लागि कर जानकारी
म कसरी व्यापार योजना लेख्न गर्छन्?
NOLO देखि नाफारहित स्रोतहरू
तपाईंको नाफारहित कसरी समावेश गर्न